Vaovao mendrika atao printy · Global Voices teny Malagasy
' ... tsy maintsy mampitombo avo roa heny ny ezaka ny fiarahamonim-pirenena hiarovana ny fahalalahan-gazety'
Voadika ny 13 Mey 2022 4:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, عربي, English
Sary avy amin’ IFEX, nahazoana alalana.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Annie Game, tale mpanatanteraka ao amin'ny IFEX, tambajotra manerantany izay mampiroborobo sy miaro ny fahalalahana maneho hevitra sy torohay ho zon'olombelona fototra ary naverina navoaka ato amin'ny Global Voices amin'ny alàlan'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Ny vaovao ratsy dia nahatratra ny avo indrindra hatramin'izay nisiana ny fandotoan-torohay (information). Tsy misy marina mihoatra izany noho ny amin'ny fotoan'ny krizy, rehefa feno “torohay” ny faham-baovaontsika – ka ny ankamaroany dia tsy marina, mamitaka, na namboamboarina tsotra izao.
Ny vaovao tsara dia miatrika ity loza ity ny fiaraha-miombon'antoka vaovao eo amin'ny fampitam-baovao sy ny fiarahamonim-pirenena, manerana an'izao tontolo izao, mandritra ny taona, manao izay hahatonga ny vondrom-piarahamonintsika hahara-baovao sy ary fitaovana kokoa hirotsaka hiatrika ireo lohahevitra izay manatsara ny fiainany. Ohatra, mampiasa ny maodely nozarainy sy niaraha-niasa ny Bellingcat mba hanitsiana ny firodan'ny tantara sy lahatsary faikany miparitaka momba ny ady ao Okraina.
Fikambanan'ny firaisamonim-pirenena maro no niara-niombon'antoka tamin'ny mpanao gazety sy ny fampahalalam-baovao mba hanapongatra ireo teorian'ny tsikombakomba, ary koa mba hahazoana antoka fa tonga any amin'ny olona ny vaovao tena ilaina sy marina mba hahafahan'ny olona hitoetra amin'ny toerana azo antoka mandritra ny valan'aretina COVID-19. Ny hafa indray manohana sy miasa miaraka amin'ny mpanao gazety hiaro ny paika demaokratika — mampibaribary sy manitsy ireo fandisoam-baovao zary lasa fitaovam-piadiana hamitahana ny mpifidy sy hanafoanana latsabato mandritra ny fifidianana any amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao.
Mba hizarana ny iray monja amin'ireo tetikasa maro toy izany, ny Fact-Check Ghana dia miasa mba hanoherana ny fihanaky ny vaovao iniana disoina, sy ny propagandy any Afrika Andrefana, indrindra mandritra ny fifidianana, adihevitra ara-politika, ary ny fahasalamam-bahoaka sy ny hamehana hafa.
Amin'izao Andro Maneran-tany ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety izao, andao isika hieritreritra momba ny toetry ny fampahalalam-baovaontsika, izay mety amin'ny fampitam-baovao, sy ny dikan'izany ho an'ny sisa amintsika.
Ny mpanao gazety angamba no tena hitan'ny maro amintsika ho mpanome vaovao. Izy ireo ihany koa no manoka-baravarana ho amin'ny torohay azo itokisana, azo takarina, marina, voamarina izay manampy ampahafantarana ireo fanapahan-kevitra mamolavola ny fiainantsika sy ny fiarahamonintsika.
Mihamaro ny fampahalalam-baovao tsy ampy loharanom-baovao, terena ho ivelanjotra (offline), voafatotry ny fitoriana stratejika ataon'ireo mpanankarena sy mahery eny amin'ny fitsarana hamelezana azy ireo, tsinontsinoavina sy alain'ireo olona tsy zoviana sy fanta-daza baràka, ambanana, kendaina roroka, gadraina, ary tafihin'ireo tsirefesimandidy.
Mahareraka ny fikoriam-baovao iankinan'ny aina sy azo antoka, dia isika rehetra no resy. Mamela banga goavana izany, mora fenon'ny media sosialy — taninketsa goavan'ny fandisoam-baovao, sy maodelim-pihariana mety (miasa) amin'ny fanamafisana, ary amin'ny farany mampisara-bazana sy mampifikitra fomba fijery mifototra amin'ny hevitra sy ny lainga, fa tsy ny zava-misy.
Ny vokatr'izany ny rivo-baovao mikorontana loatra hany ka very ny fahafahantsika manavaka ny marina amin'ny lainga. Mahatonga antsika izany ho mora mandray kokoa ny valiny mora loatra sy bitika manoloana ny olana tena misy sy sarotra.
Mety tsara amin'ny mpitondra jadona izany. Faly tokoa izy ireo manome valiny mora raha manome tsiny ireo tena tsara toerana hihaika ireo fitantarana diso ireo. Haratsiratsian-dry zareo (ho devoly) ny fampahalalam-baovao, mampidi-doza ny mpanao gazety amin'ny kabary masiaka izay mikendry ny hanaisorana ny fitokisan'ny vahoaka azy, hamela ny fampitam-baovao malalaka sy mahaleotena ho ao anatin'ny fahasahiranana, anoloana ambana.
Eo no idiran'ny firaisamonim-pirenena: manohana, manandratra ary mampiroborobo ny asan'ny mpanao gazety, manasongadina ny filantsika iombonana hahazoana fahamarinan'ny fampahalalam-baovao, ary hiampanga ireo fomba fanao mikendry hanimba ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety izay ianteheran'izy ireo.
Io no iray amin'ireo fiarovana tsara indrindra sy tena ilaina azontsika omena ny fampitam-baovao — mba hahazoana antoka fa hanohy hanome lanja ny vaovao ny olona, ​​ary hanana fahatokisana amin'izany. Hanohitra ireo lalàna mampikorontana ny asany. Mba hampiroboroboana ny fiarovana azy ireo, ary tsy ho sasatra ny hiteny hahazoana rariny rehefa voadaroka tsy misy fanasaziana.
Tsy tsontsa isika. Fantatsika fa misy tsy mahay milalao any amin'ny andrim-panjakana (fikambanana) rehetra, ary tsy miavaka amin'izany ny fampitam-baovao. Saingy raha ny momba ny fiantohana ny zontsika hahazo vaovao, ny fampitam-baovao no mpiara-dia amintsika lehibe indrindra – ary ilaina koa isika ho izany amin-dry zareo.
Koa satria manamarika ny Andro eran-tany ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety 2022 isika izao, dia tsy maintsy mampitombo avo roa heny ny ezaka ataontsika ny fiarahamonim-pirenena hiarovana ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety. Amin'izao vanim-potoana izao isika mila tomady fa tsy hiangana fotsiny ihany.
Mbola hoela isika no ato. Mila mijoro maharitra isika.